आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक - Arthakoartha.com
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक
विराटनगर, ६ माघ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा ३ तीन अर्ब ८८ करोड ९७ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रू. ३ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख ८८ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको थियो ।
गत आवको सोही अवधिमा कार्यालयले ३ तीन अर्ब ५१ करोड ५३ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आवमा सो अवधिको ३७ करोड ४४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कार्यालयले आयकर एक अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ८२ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर एक अर्ब १४ करोड १९ लाख ८९ हजार, अन्तःशुल्क एक अर्ब २० करोड ८९ लाख ६३ हजार असुली गरेको छ । अन्तःशुल्कतर्फ दुई अर्ब तीन करोड ४४ लाख २३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । मदिरा पदार्थको कारोबारमा कमी आउनु, विकास निर्माण कार्यले तीव्रता नलिनु र जग्गाको कारोवार नहुनु लगायत कारण अन्तःशुल्क लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेको बताइएको छ ।
कार्यालयले आयकरमा १३२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा १५९ प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । अहिले मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको, व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढी रहेको, निर्माणका कार्य पनि शुरु भएको अवस्थामा र कारोना महामारीको अवस्थामा पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएकाले आउने दिनमा अन्तःशुल्कमा पनि सुधार हुने कार्यालयले बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा प्रविधिको प्रयोगमा जोड
ट्रम्पले डब्लुएचओको ४० करोड डलर बजेट रोके
गुठी विधेयकले तताएको राजधानी र आत्तिएको दुई तिहाई !
चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओ भर्नेहरुलाई केवलकारमा २५ प्रतिशत छुट